Captain Irene Koki Mutungi, a makwaara dị ka Koki Mutungi, bụ ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara na Kenya, akụ na ụba kachasị na East African Community. Ọ bụ nwanyị mbụ nọ na mpaghara Afrịka gbagoro ụgbọ elu Boeing 787. Ọ na-arụ ọrụ maka Kenya Airways, ụgbọelu mba Kenya
Site na: KongoLisolona: February 10, 2018 00: 27 Enweghị asịsa
A mụrụ ya na ndị nne na nna Kenya na 1976. Nna ya bụ onye na-anya ụgbọelu ya na Kenya Airways. Ọ larala ezumike nká ma bụrụ onye ndụmọdụ maka ụgbọ elu. Koki gara Moi Girls School Nairobi. Mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị na 1992, mgbe ọ dị afọ iri na asaa, o debara aha ya n'ụlọ akwụkwọ ụgbọ elu Nairobi na ọdụ ụgbọ elu Wilson, ebe ọ nwetara ikikere ụgbọ elu onwe ya. Ọ gara n’ihu ọzụzụ ọzụzụ ụgbọelu ya na Oklahoma City na United States, ebe ọ nwetara akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ elu azụmahịa, nke gọọmentị Federal Aviation nyere.
Ọ laghachiri Kenya na 1995, ndị Kenya Airways goro ya n'ọrụ, ebe ọ bụ naanị ya bụ nwanyị ọkwọ ụgbọ mmiri afọ isii. N'afọ 2004, ọ ghọrọ nwanyị nwanyị Africa mbụ nke enyerela ikike ịnya ụgbọ elu azụmahịa, mgbe enyere ya akwụkwọ ikike ịbụ onye isi ụgbọ Boeing 7374. E mechara nweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ elu Boeing 767.
Ọ gbasoro ọzụzụ mmegharị ahụ nke nyere ya ohere ịgafe ọchịagha nke Boeing 787 Dreamliner. Kenya Airways akwalitela ya ka ọ bụrụ Ọchịagha nke B787, na-eme ka ọ bụrụ nwanyị mbụ Africa ghọrọ ọrụ a n'ụwa.
A malitere mkpali ya ka ọ bụrụ onye ọkwọ ụgbọ mmiri n’oge ọ bụ nwata, na-ele nna ya anya, n’oge ahụ ọ na-anya ụgbọelu Kenya Airways. Kọmịshọna Mutungi, onye mụrụ nwa nwoke, amụrụ na gburugburu 2006, nwere mmasị ịnyagharị ma na-akwado ndị ọzọ, ọkachasị ndị ọkwọ ụgbọ elu ụmụ nwanyị. Na Septemba 2014, Mutungi bụ otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọ elu nwanyị 39 nke Kenya Airways, n'ime ngụkọta nke 530, ọ bụkwa onye isi ụgbọ njem na Nairobi-Paris rụrụ na B7878. Ọ na-eche maka ịmepụta ụgbọ elu nke ya, ebe ọkara nke ndị ọkwọ ụgbọ elu ga-abụ ụmụ nwanyị.
Ndị Namibia na-enyocha: (E = M6) ụmụ akwụkwọ ndị a na-eto eto Namibia na-emepụta telifon site na nke mmadụ nwere ike iji nkwurịta okwu redio na-ekwurịta okwu n'enweghị kaadi SIM na enweghị ekwentị cable
Ọkt20 01: 46